Ndeipi mutengo wekugara muIraq? - ALinks
Mutengo wekurarama kumunhu mumwechete muIraq wakatenderedza 730,000 Iraqi Dinars, kana mazana mashanu emadhora ekuUS, pamwedzi. Mutengo wekurarama wemhuri yevana muIraq wakatenderedza 500, kana 2,400,000 US Dollars, pamwedzi.
Iraq inyika iri kumadokero kweAsia. Baghdad ndiro guta guru reIraq. Hupenyu hwehupenyu hwevanhu muIraq hwakaita nani mumakore mashoma apfuura.
Iraq imusha kune akawanda akasiyana madzinza uye magariro nehupfumi mapoka. Pane musiyano mukuru muvanhu nemakirasi avo muIraq. Kukamukana kukuru kuri pakati pevapfumi nevarombo. Boka repakati riri kupera. Basra, muIraq, iguta riri nani kupfuura mamwe uye nzvimbo yaro yehupfumi. Inopa mabasa akakwana kuvanhu vanenge vapedza zvidzidzo zvavo.
Mari iri muIraq iIraqi dinars, kana د.ع, kana IQD. 10,000 Iraqi dinars inotenderedza 7 US Dollars, kana $ kana USD, kana kutenderedza 530 Indian Rupees. Izvo zvakatenderedza 6.50 Euros kana makumi mana nematanhatu eChinese Yuans.
Baghdad ndiro guta guru muIraq. Mutengo wekugara kumunhu mumwechete muBaghdad imadhora mazana mashanu pamwedzi. Ndiyo iri pamusoro pe500% yemaguta asingadhure pasirese. Asi ndiyo inodhura zvakanyanya pakati pemaguta e37 muIraq. Avhareji yemuhoro mushure memutero pano imadhora mazana mashanu nemakumi mashanu anokwana kubhadhara mutengo wemwedzi mumwe.
Vanhu vanoshandisa sei mari yavo muIraq?
Vazhinji veIraquis vanoshandisa mari yavo mumusika, pakudya, uye nezvimwe zvinodiwa. Kunze kweizvozvo, chikamu chikuru chemari yekubhadhara vanhu varipo ndeye rendi. Maresitorendi uye zvekufambisa zvakare chikamu chakakosha chemari. Kutenga mbatya neshangu ndiko kwekupedzisira pakurongwa. Nhamba dzinoratidza kuti isingasviki 3 muzana yendyiko dzose dziri pazvipfeko.
Iyi ndiyo mimwe yemitengo yaunogona kuwana muIraq.
Zvekufambisa zvakare zvinokwanisika muIraq kunyanya kana ukashandisa zvifambiso zvevoruzhinji. Kupfuura kwepamwedzi kwezvifambiso zveveruzhinji kunokubhadharisa 30 $ izvo zvakanaka asi zvinodhura kune vamwe vanhu. Zvakadaro machaji etikiti emazuva ese ari kutenderera 0.40 $, zvine musoro. Mateksi anogona kukupa rwendo rwakanaka rwemadhora mashanu paawa.
Kana ukasarudza kugadzira chikafu chako saka isarudzo yakachipa uye ine hutano pane kudya chikafu chemumugwagwa. Misika yeIraqi inopa zvakasiyana siyana zvezvigadzirwa uye zvizhinji zvacho zvinokwanisika. Unotosvika pakuziva zvese zvauri kudya.
Kugara kutenga kofi/croissants/baguettes $120
Zvekushandisa muIraq hazvina kudhura. Unogona kutarisira kushandisa mari inosvika zana remadhora kuvhara mabhiri ekutanga. Mabhiriji ekutanga anosanganisira magetsi, kudziyisa, kutonhora, uye mvura inogara mufurati inosvika 100 square metres.
Prepaid mobile sevhisi inotenderedza 0.11 $ paminiti yezwi. Hurongwa hwenharembozha madhora makumi matatu nemashanu pamwedzi. Izvo zviri pasina iyo foni handset pachayo.
Magetsi ega anogona kuita $110 kwemwedzi mitatu. Uye gasi rekudziya kana chitofu rinotenderedza madhora makumi matanhatu kwemwedzi mitatu. Indaneti inosvika $3 pamwedzi.
Ukaenda kuresitorendi mitengo yepano haina kunyanya kukwira asi kana kuderera. Sarudzo yekudya kwemugwagwa inogara yakazaruka, asi kana iwe uchida kudya muresitorendi unofanirwa kubhadhara 5 $. Maresitorendi epakati-renji anodhura anenge madhora gumi pamunhu.
Kudya kwemasikati kwevaviri newaini kashanu pamwedzi $ 350
Mitambo uye zororo
Mitambo uye nhandaro hazvina kudhura pano asi zvinouya nesarudzo yemunhu wese asi mabhiri haadaro. Saka kana ukaronga kuenda kumitambo yekurovedza muviri unofanirwa kuverenga nezvekushandisa kutenderedza 50 $ pamwedzi. Matikiti eCinema anobhadharisa pano anenge 9 $ imwe neimwe. Zvinoonekwa semutambo unodhura wevaIraqis.
Rent haina kudhura semamwe maturusi. Zvinogara zvinoenderana nechikamu cheguta raunorenda imba. Kana ukaroja imba kunze kwepakati peguta inozokubhadharisa mari shoma.
Apartment (1 imba yekurara) muGuta: 443,227 IQD
Apartment (1 imba yekurara) Kunze kweguta: 289,072 IQD
Apartment (3 bedrooms) mu Guta: 787,990 IQD
Apartment (3 bedrooms) Kunze Guta: 509,158 IQD
Mazhinji ezvivakwa zvekurojesa anowanikwa mumaguta makuru seBaghdad, Erbil, nemamwe akawanda. MuIraq, mhando dzakajairwa dzekurenda dzimba dzine imba yekurara imwe chete kana mbiri kana nhatu dzekurara. Aya marendi anowanikwawo seane furnished uye semi-furnished properties.
Kutenga bhutsu nehembe hakuna kudhura zvekuti unogona kuenderera mberi nekuzvipa maitiro akanaka. Yemhando yejean inobhadharisa kutenderedza 30 $. Zvimedu zvembatya zvakareruka semadhirezi ezhizha nehembe zvinodhura zvishoma. Masikipa emhando seNike anodhura madhora makumi mashanu.
Majekiseni haadiwe kunyangwe ungangoda mamwe emajekiseni aya. Mishonga yekudzivirira tetanus, hepatitis B, uye Diphtheria yevana. Vadzidzi vekune dzimwe nyika vanofanira kutarisira zvakanyanya pamusoro peizvi. Rega kunwa mvura yemupombi kana mvura panzvimbo dzinotengeswa zvekudya. Mvura ine mineral yakachengeteka uye yakachipa. Bhalisa kuinishuwarenzi yehutano munyika yako kana uchibva kunze kwenyika.
Inishuwarenzi yehutano pamwedzi yepamusoro-up-up inokupa iwe kupinda muzvipatara imadhora makumi mana.
Avhareji muhoro uye muhoro muIraq
Avhareji yemuhoro muIraq i800,000 Iraqi Dinars (kana mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora eUS) pamwedzi. Mihoro muIraq yakakwira zvakanyanya kana ichienzaniswa nenyika dzakavakidzana. Izvo zvine musoro sezvo mari inodhura pano yakakwira zvakare. Kuroja pano kunodhura madhora mazana matatu uye zvishandiso 550 $ pamwedzi. Kune vanhu muIraq vasingakwanise kuzadzisa zvavanoda uye kubhadhara mari dzese.
Vanhu vanotambira mari inoita mazana maviri negumi emadhora pamwedzi vanosungirwa kusangana nematambudziko ekubhadhara zvinhu zvavanoda. Nemari yakaderera yakadaro, havagoni kupinda mumitambo ipi neipi nenhandaro kana kutotenga zvipfeko zvitsva.
Iraq yakachengeteka kune vekare-pats?
Expats, kana vatorwa, muIraq, vanowanzo shanda pachibvumirano chenguva pfupi muoiri & kana gasi rechisikigo. Vamwe vacho vanotoshanda sevashandi veNGO. Expats muIraq inowanzogara mumakomisheni akachengeteka. Kunyange zvazvo gadziriro idzi dzimwe nguva dzinowanzoita kuti rusununguko ruve rusununguko. Vazhinji vekare vanobata pano vanotaura kunzwa vakachengeteka.
Mufananidzo uri pamusoro wakatorwa muAker, Iraq. Mufananidzo na Levi Meir Clancy on Unsplash
Mabhangi Akanaka uye mabasa emari muIraq.